गृहिणीलाई आवश्यक छ केही स्पेस, यसरी हुनेछ घरको माहौल रमाइलो - Mitho Khabar
June 23, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on गृहिणीलाई आवश्यक छ केही स्पेस, यसरी हुनेछ घरको माहौल रमाइलो
घरभान्सामा काम गर्नेलाई हामी गृहणी भन्छौं । पितृसतात्मक सोंच र आवरणमा हामी महिलाईं गृहणीको जिम्मेवारी सुम्पन्छौं । अर्थात भात-भान्सा तयार गर्ने, छोराछोरीलाई ख्वाउने, जुठो भाँडाबर्तन माझ्ने, घर सफा गर्ने, सागसब्जीको व्यवस्था गर्ने, लुगाफाटो मिलाउने सबै काम उनीहरुलाई दिन्छौं । यी सबै काम एक गृहणीले चुपचाप गरिरहेका हुन्छन् । तैपनि हामी भन्छौं, ‘मैले श्रीमति पालेको छु ।’जबसम्म पुरुषमा यस्तो दम्भ र भ्रम मेटिदैन, तबसम्म घर-गृहस्थीमा सुख भित्रिदैन । घरमा सुख तब भित्रिन्छ, जब गृहणीको रुपमा महिलालाई मात्र खुम्चाइदैन । भात-भान्साको काममा सबैले सराबरी सहभागिता जनाउँछौ भने मात्र घर सुखमय हुन्छ ।
गृहणीः परिवारको मियो: गृहिणी पुरै परिवारको मियो हुन् । तर, उनीहरुले गरेको काम हामीलाई काम लाग्दैन । त्यसलाई रत्तिभर महत्व दिदैनौं । सानोतिनो झै-झमेला व्यवस्थापन गर्न उनीहरुलाई कति सास्ती छ भनेर बुझ्दैनौं । गृहिणीहरु आफ्नो परवाह नगरि पति, सासुससुरा र बच्चाहरुको रेखदेखमा लागि रहन्छन् । बिहानदेखि बेलुका सम्म मेसिनले जस्तै घरको सारा काम सक्ने र सबैको ध्यान राख्ने गृहिणीको लागि आफ्नो लागि भने समय धेरै कम हुन्छ । गृहिणीहरुलाई थोरै समय निकालेर आफूलाई मनपरेको काम गर्ने फुर्सद कहिल्यै हुँदैन । सारा परिवारको अपेक्षाहरु पुरा गर्दागर्दै उनीहरुको सारा जिन्दगी बित्छ । यस्तै उनीहरुले आफ्नो मनोमानी गर्न थालेमा भने घरका अरुलाई यो कुरा मनपर्दैन । के उनीहरुको आफ्नो कुनै इच्छा र आकांक्षा हुँदैन ? अरु सबैको लागि जिउने उनीहरुलाई थोरै समय पनि आफ्नो लागि जिउने हक हुँदैन ?
पतिको एकाधिकार: अफिसबाट घर आउँदा आफ्नी पत्नीले सबैकुराको ख्याल राखुन् भन्ने हरेक पतिको चाहना हुन्छ तर, उनीहरुलाई पत्नीले घरका अन्य सदस्यहरुको पनि हेरचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मतलब हुँदैन । उनीहरु आफ्नो पत्नीको समस्या बुझ्न नै चाँहदैनन । आफुले गर्न सक्ने ससाना काम पनि पत्नीले नै गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तोमा पत्नीले, ‘मेरो पनि अरु धेरै काम छ, म थाकेको हुन्छु, मेरो पनि केही रहर र इच्छाहरु छन्’ भनेर भनिन् भने उनीहरु पत्नीसँग रिसाउन थाल्छन् । यहि सानो कुराले पतिपत्नी बीचमा झगडा सुरु हुन्छ ।
बच्चाको मनोमानी: बच्चाहरुको स्याहार र उनीहरुले भनेका हरेक कुराहरु पुरा गर्दा गर्दै आमा थाकिसकेकी हुन्छिन् । बच्चालाई खाना खुवाउने, उनीहरुको कपडा धोइदिने, नुहाइदिने, स्कूलको लागि तयार गरिदिने र पढ्न र होमवर्कको लागि सघाउने सबै काम आमाले नै गर्नपर्छ । जब पति र बच्चा घरमा हुन्छन् गृहिणीहरुलाई फुर्सद नै हुँदैन । गृहिणीको कुरा कसैले सुन्दैनन् । गृहिणीले आफ्नो पति र बच्चाहरुको लागि सबै खुसी त्यागिदिन्छिन् । जस्तैः कुनै गृहिणीलाई घरमा काम गर्दा पुराना लोकगीत सुनेर काम गर्न मन लाग्छ तर, बच्चाहरुलाई लोकगीत मन पर्दैन र उनीहरुले गीत बन्द गरिदिन्छन् । उनको मन दुख्छ तर, आफ्नो बच्चाको खुसीको लागि उनी केही भन्न सक्दिनन् । यस्तोमा पति र बच्चा घरमा नभएको बेलामा गृहिणीले आफूलाई मनपर्ने गीत सुन्ने र मनपर्ने काम गर्छिन् ।
बच्चाको पढाई: अहिले प्रतिस्पर्धाको जमाना छ । सबै अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई अरु भन्दा अगाडि देख्न चाहन्छन् । यस्तोमा बच्चाको पढाई राम्रो बनाउने जिम्मा पनि गृहिणीकै वा आमाकै काँधमा हुन्छ । बच्चाको राम्रो वा खराब नतिजा दुवैमा गृहिणीलाई जिम्मेवार मानिन्छ । त्यसैले गृहिणीलाई बच्चाको पढाईमा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरुलाई होमवर्क गराउने पढाउने काम गर्नुपर्छ । अझै विशेष गरि परिक्षाको समयमा त गृहिणीलाई उनको आफ्नै परिक्षा चलिरहेको जस्तो लाग्छ र परिक्षामा बच्चालाई अब्बल स्थानमा ल्याउन दबाब उनीमा हुन्छ । यी दिनहरुमा गृहिणी नै सबैभन्दा धेरै बन्धनमा परेका हुन्छन् ।
परिवारको स्वास्थ्य: यदि बच्चा बिरामी भए भने यसलाई गृहिणीकै गल्ती मानिन्छ र उनीहरुले ध्यान दिएनन् भनिन्छ । त्यस्तै गृहिणीहरुले सासुससुराको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यदि उनले सँधै सादा खाना बनाइन भने कसैलाई पनि मन पर्दैन । यदि उनले कहिले केही विशेष परिकार बनाइन भने खानेबेलामा सबैले मिठो मानेर खान्छ । तर, कसैको पेट अलि खराब भयो भने उनीहरुलाई यस्तो चिल्लो पिरो, मसालेदार परिकार बनाउने किन बनाएको भनेर समेत गालि गरिन्छ । एक त उनीहरुलाई बिहान देखि बेलुकासम्म सास फेर्ने पनि फुर्सद हुँदैन त्यसमाथि पनि सबैले उनैलाई अपजस दिन्छन् ।
आफ्नो लागि पनि जिउन चाहन्छन् गृहिणी: यदि पतिलाई आफ्नो साथीहरुसँग घुमफिर गर्ने र मोजमस्ती गर्ने हक छ र बच्चाहरुलाई पनि आफूलाई मनपरेको कुरा गर्ने स्वतन्त्रता छन भने गृहिणीलाई किन छैन ? केही क्षणको लागि भने पनि उनीहरुलाई आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्ने हक छ । उनीहरुलाई पनि स्पेस चाहिन्छ । त्यसैले आफ्नी पत्नीको समस्या पतिहरुले बुझ्नुपर्छ र उनीहरुलाई घरको काममा सघाउने मात्रै होइन केही समय निकालेर उनीहरुलाई मनपर्ने कुरा गर्ने छुट दिनुपर्छ । यसो भएमा घरको पारिवारिक वातावरण र दाम्पत्य जीवन सुखद हुन्छ ।
रामकुमार नेपालीले ल्याए ‘घुर्‍यानको मुला’
June 28, 2021 mithokhabar